सधै खुशी हुन चाहनुहुन्छ ? पढ्नुहोस - नयाँ कुरो
सधै खुशी हुन चाहनुहुन्छ ? पढ्नुहोस
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार १२:२३
काठमाडौं ।। मनिसमा खुसि र सुखी हुन फरक कुरा हो । अहिलेको समयमा मानिसहरु निकै तनावमा हुन्छ । हाम्रो जिवनमा के चाहन्छ ? हामी कस्तो जविन बिताउन चाहन्छौ ? के धेरै धन सम्पती भएर मात्र खुसी हुन्छौ ? मानिसको जिवनमा सुख,शान्ती,समृद्धि,स्वस्थ्य,प्रेम,भाव,अन्नद यहि सब चाहियो । खुसी हुनका लगाी हामी अनेक कुराहरु ऋपनाउछौ । कोही खुला ठाउमा गएर रमाउछ त कोही साथीभईहरुसँग समय विताउन पाउँदा खुसी हुन्छ । जीवन रहे सम्म यी सबै गर्छौ हामी । कोही चाँही आफ्नो सपनालाई पछ्याउँदै स्वतन्त्र रुपमा अगाडि बढ्नुलाई खुशी मान्छन । जे जस्तो भए पनि खुशी रहनु ठूलो कुरा हो।
खुशीले मानिसलाई आत्मसन्तुष्टि दिन्छ। तपाईंलाई कसरी खुशी रहने भनेर जिज्ञासा छ भने केही उपायहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ।
१. धेरै सुत्ने
सुन्दा सामान्य लागे पनि सान्तोसका अनुसार यो अभ्यासको पूर्ण रूपमा पालना गर्न भने निकै गाह्रो छ। एक हप्ताका लागि पूर्णरूपमा आठ घण्टासम्म सुत्नुपर्ने हुन्छ।
”सुन्दा असहज जस्तो लागे पनि पर्याप्त मात्रामा सुत्नाले डिप्रेसन जस्तो रोगबाट बच्न र सकारात्मक दृष्टिकोण वृद्धि गर्नका लागि समेत सहयोग गर्छ,” सान्तोसले भनिन्।
२. हरेक दिन ऐना अगाडि मुस्कुराउँनुस्
हामी खुशी मुस्कानमा समेत झल्किन्छ । हामी जब खुशी हुन्छौँ तब हाँस्छौँ।
मुस्कुराउनु किन राम्रो हो भने यसले दिमागबाट डोपामिन नामक हार्मोन रिलिज गर्छ, जसले गर्दा हामी खुशी हुन्छौँ।
हाँसोको मतलब बनावटी हाँसो होइन। हरेक बिहान ऐना अगाडि हाँस्ने अभ्यास गर्नुस्, खुशी हुन सिकिन्छ।
३. कसरत गर्नुस्
कसरत शरीरका लागि मात्र आवश्यक छैन। नियमित व्यायामले तनाव, चिन्ता अनि डिप्रेसनका लक्षणहरुलाई आत्मविश्वास र खुशीमा बदल्न मद्दत गर्छ।
थोरै मात्र व्यायाम गर्दा पनि धेरै फरक पार्छ। ५ मिनेट पनि आङ तन्काउनुभयो भने हल्का हुन्छ। त्यसैगरी हिँड्ने बानी बसाल्न सक्नुहुन्छ।
रातिको खाना खाएपछि एकछिन टहल्नु राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी योग कक्षा पनि लिन सक्नुहुन्छ। नृत्य गर्नुहोस्, आफ्नो मन परेको खेलकुद खेल्नुस् खुशी भइन्छ।
४. डायरी या टिपोट गर्ने बानी बसाल्नुस्
लेख्नु आफ्ना विचार तथा भावना पोख्ने अनि योजना बनाउने राम्रो माध्यम हो। यसरी लेख्दा मन हल्का हुन्छ।लेख्नका लागि तपाई विद्धान वा एकदमै लेख्न जान्ने हुनुपर्छ भन्ने छैन। हरेक रात सुत्नुभन्दा पहिले केही न केही लेख्ने बानी बसाल्नुस्।
५. साथीभाइ वा प्रेमीसँग भेट्नुस्
मिल्ने साथी भयो भने धेरै कुरा सेयर पनि हुन्छ र खुशी रहन सकिन्छ। साथीहरुको याद आयो भने समय मिलाएर भेट्नुस् ।
प्रत्यक्ष भेट्नै सकिएन भने पनि फोन तथा म्यासेजमा कुरा गर्दाको क्षण पनि आनन्दाभूती दिने हुन्छ। जति ठूलो हुँदै गयो, साथीहरु पनि घट्दै जान्छन्।
धेरै साथीहरु हुनु ठूलो कुरा होइन, मिल्ने साथी हुनुपर्छ। एउटै साथी भए पनि काफी हुन्छ। एउटै साथी धेरै नै मिल्ने भए, उसलाई प्रेमी बनाउँदा पनि फरक पर्दैन । उमेरले प्रेमलाई छेक्दैन ।
६. सामाजिक सञ्जालमार्फत जोडिनुभन्दा वास्तविक सम्बन्ध विस्तार गर्नुहोस्
सान्तोसका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त हुने झुटो खुशीमा बहकिनु हुँदैन। ”इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू त्यस्ता किसिमका सञ्जालहरू कम प्रयोग गर्नेहरूको तुलनामा कम खुशी हुन्छन् भन्ने कुरा एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ,” सान्तोस भन्छिन्।
यदि तपाईँ साँच्चिकै सुखी हुन चाहनुहुन्छ भने आभारी हुन सिक्नुहोस्। परिवारका सदस्य तथा साथीभाइसँग भेटधाट गर्नुहोस्।
केही मिनेटका लागि भए पनि दिमाग खुल्ला राख्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग घटाउनुहोस् र बढी सुत्नुहोस्।
होम आइसोलेसन रहँदा कोरोना
पोष्ट कोभिडको बारेमा जान्नै
अनर्गलरुपमा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर
शरीरको तौल लसुनको सेवनबाट
मिर्गौला खराब हुनबाट बच्न